Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao Football Football Adama Traore Tantara Firaisana Ankizy Miampy Untold Biography Facts
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny "football genius" fantatra amin'ny anarana hoe "Usain Bolt". Ny tantaranay Adama Traore Childhood Story Plus Untold Biography Facts dia mitondra anao ny tantara feno momba ny zava-nitranga miavaka hatramin'ny fahazazany hatramin'izao.
Ny Fiainana sy fisondrotana Adama. Credits sary: ​​mahaleo tena, mahaleo tena SportsMole, Joe ary FC-Barcelona
Eny, mahafantatra ny rehetra momba ny fananganana hozatra sy ny hafaingany ny hozatra izay mahatonga azy ho iray amin'ny mpilalao baolina kitra haingana indrindra amin'ny FIFA sy izao tontolo izao. Na izany aza, vitsy monja no mihevitra Adama Traore'biolojia izay mahaliana. Izao raha tsy mila ado intsony, andao hanomboka.
Adama Traore Tantara Firaisana Ankizy Miampy Fanamarihana Biography Untold - Fiainana tany am-piandohana sy fianakaviana
Manomboka, Adama Traoré Diarra no anarany feno. Adama Traore araka ny niantsoana azy matetika dia teraka tamin'ny andro 25 tamin'ny Janoary Janoary 1996 tamin'ny reniny, Fatoumata sy rain'i Baba Traoré ao amin'ny kaominin'i L'Hospitalet de Llobregat, atsimo andrefan'i Barcelona. Izy dia zanakalahy sy zanany faharoa amin'ireo zanany telo nateraky ny ray aman-dreniny mahafinaritra izay naseho etsy ambany.
Hihaona amin'ny ray aman-dreny Adama Traore- Ny reniny (Fatoumata) sy i Dada (Baba). Ny trosa amin'ny IG
Ny ray aman-drenin'i Adama Traore dia mpifindra monina espaniola izay avy amin'ny fianakaviana nipoiran'izy ireo / niaviany avy tany Mali, firenena iray manan-tany misy ao Afrika Andrefana. Torohevitra iray… Ny firenena Afrikana Tandrefana ao Mali dia mahaforona eo amin'ny antsasaky ny Tany Sahara ary io no firenena fahavalo lehibe indrindra any Afrika.
Sarintany mampiseho ny firenena Mali- Adama Traore Family Origin. Sary: TheFactFile
Ny ray aman-drenin'i Adama Traore dia nandao ny fireneny tany Mali mba hipetraka ao Barcelona, ​​tanàna izay inoany fa hanome fotoana tsara kokoa ho an'ny zanany. Fanapahan-kevitra no nanonerana izany.
Nihalehibe i Adama Traore dia tsy toy ny kintana baolina sasany (ohatra Gerard Pique, Mario Gotze ary Hugo Lloris) izay niaina fiainana niainana alohan'ny hahatongavan'ny stardom. Avy amin'ny fianakaviana manana saranga antonony antrano izy, izay ray aman-dreniny tsy nahavitan'ny amboarany kilalao vaovao indrindra ho azy tamin'ny naha-zaza azy, fa baolina kitra fotsiny.
Nihalehibe niaraka tamin'i Moha zokiny lahy ary i anabavy mahafinaritra iray, Asa, ao amin'ny tokantrano tia baolina kitra i Adama. Rehefa nitaiza tao amin'ny tanànan'ny Espaniôla ao Espana, dia voajanahary ho azy sy ny ankohonany tanteraka izany.
Adama Traore Tantara Firaisana Ankizy Miampy Fanamarihana Biography Untold - Fanabeazana sy fanabeazana
Ny fitiavana ny lalao dia nanjaka noho ny fanatanjahantena hafa satria Adama niaraka tamin'ny rahalahiny Moh nanomboka nanomboka nitazona baolina kitra tamin'ny kianjan'ny CE L'Hospitalet. Fotoana fohy taorian'izay dia nanomboka nahazo fampianarana baolina kitra tao amin'ny Centre D'Esports L'Hospitalet, fikambanana iray izy ireo izay samy nanao fandrosoana mahafinaritra.
Adama Traore dia nahatadidy ny fanabeazana baolina kitra voalohany tany amin'ny CE L'Hospitalet Football Club. Credits sary: BBDFutbool,& Joe.
Tany am-boalohany dia samy nahalala fa manan-talenta izy roa ary afaka manao zavatra lehibe amin'ny baolina kitra. Ho an'ny ray aman-dreniny sy ny fianakaviany, tsy niambahamba be loatra na dia nifindra nankany amin'ny lalana marina i Moha sy Adama. I Adama Traore no nandroso haingana kokoa noho ny rahalahiny satria izy talenta kokoa.
Tamin'ny taona 2004, dia nandoa vola ny nofin'ny fianakaviana Traore. Nanasa an'i Adama hiatrika fitsapana ny Adama malaza ao amin'ny klioba Barcelona, ​​La Masia. Ny rahalahiny rahalahiny Moh dia nasain'ny mpiara-monina taminy Espanyol roa taona aty aoriana.
Adama Traore Tantara Firaisana Ankizy Miampy Fanamarihana Biography Untold - Ny fiainam-piarahamonina tany am-piandohana
Taorian'ny vanim-potoana fohy niarahana tamin'ny CE L'Hospitalet, nisy fitsapana nahomby nahita an'i Adama Traoré niditra tao amin'ny Akademia malaza any La Masia any 2004 tany Espana tany Adama Traoré, tamin'izy valo taona.
Adama Traore tany am-boalohany niaraka tamin'i La Masia- FC Barcelona Academy. Sary: Joe
Miverina sy ankehitriny, nofinofin'ny ankizy rehetra ny hiaraka amin'ny La Masia, iray amin'ireo akademisiana mahay indrindra erak'izao tontolo izao. Rehefa niaraka izy ireo dia nahafinaritra an'i Adama kely. Mba hiatrehana ny fifaninanana henjana dia tsy maintsy manao sorona betsaka izy toy ny tsy fahaterahana sy ny zavatra niandrasana azy tao an-trano. Ilaina avokoa ireo fahafoizan-tena ireo mba hahafahany nanao fahatsapana voalohany ny fikambanana.
Fantatrao ve?… Ny taona (2004) izay nampidirin'i Adama tamin'ny La Masia dia nifanandrify tamin'ny taona Lionel Messi nipoaka teo amin'ny sehatry ny baolina kitra senior. Rehefa afaka izany, Adama sy ireo ankizy hafa rehetra dia nanaraka ny dian'ny AKA zazalahy zazalahy La Pulga (GOAT).
Adama Traore Tantara Firaisana Ankizy Miampy Fanamarihana Biography Untold - Road to Fame Story
Nidina an-dalambe niaraka tamin'i La Masia, Adama dia nanohy nampiseho fandrosoana rehefa namakivaky ireo filaharana amin'ny oniversite. Na dia fohy aza, ny heriny sy ny heriny ary ny herin'ny tselatra no nahatonga azy ho malaza amin'ny ambaratonga tanora. Fantatrao ve? Adama Traore nahazo ny anaram-bosotra 'Usain Bolt'noho ny hafainganam-pandehany nipoitra nandritra ny taona nahaterahany tany Barcelona La Masia Akademia.
Adama Traore dia nilalao teo anilan'ny mpanohitra efa antitra sy lehibe noho izy. Ny trosa FC-Barcelona
Satria tsara izy, dia nanjary matetika natao tamin'ny mpifanandrina amin'ny sokajin-taona lehibe kokoa i Adama nirohotra tamin'ny mpilalao lehibe noho izy. Izy dia samy nampiasaina ho lamosina havanana ary mpanafika nandritra ny androny tao La Masia.
Raha ny zaza hafa dia nidina tao amin'ny Akademia La Masia tena mifaninana noho ny tsy fahampian'ny fampisehoana, Adama Traore dia tsy araka ny naha-tsara azy tamin'ny fanaovana ny asany. Ity ambany ity misy porofo lahatsary mampiseho ireo fampisehoana mahatalanjona an'ny prodigy baolina nandritra ny fotoany tany La Masia. Fividianana manokana ho an'ny AirFutbol.
Adama Traore Tantara Firaisana Ankizy Miampy Fanamarihana Biography Untold - Mitsangàna amin'ny tantara
Tamin'ny taona 2013, dia nanjary mahazatra niaraka tamin'i Barcelona B i Adama Traore, izay nahitana mihoatra noho ny fisehoan'ny ligy 40. Tena nanampy tamin'ny ekipan'ny Barcelona B izy tamin'ny fandresena ny 2014 UEFA League League.
Adama Traore mankalaza ny UEFA League League miaraka amin'ny mpiara-miasa aminy. Sary: TalkSports
Tamin'io taona io ihany, Adama dia nanao ny haino aman-jery matihanina tamin'ny ilany zokiolona FC Barcelona rehefa nisolo azy Neymar tamin'ny fandresena La Liga. Noho ny fampisehoany mahatalanjona ao amin'ny ekipan'ny FC Barcelona B sy ny ekipa zokiolona, ​​ny klioba eropeanina dia nanenjika ny sonia.
Tamin'ny 14 Aogositra 2015 dia niditra tao amin'ny klioba Premier League Aston Villa i Adama Traoré ary herintaona taorian'izay dia nanohy ny fampiasan'ny Middlesbrough izy. fandriampahalemana hiteraka olana maro ho an'ireo mpiaro ny mpanohitra. Ny fahombiazana ara-panatanjahantena tsara indrindra nataon'i Adama Traore tamin'i Boro dia tonga rehefa nalaza ilay malaza mazia mazia loka izay; "(1) ny mpilalaon'ny Middlesbrough's Fans 'Player of the Year, (2) Mpilalao tanora an'ny taona ho an'ny Middlesbrough ary (3) Mpilalao mpilalao ao amin'ny Middlesbrough amin'ity taona ity.
Adama Traore dia mihetsika miaraka amin'ny iray avy amin'ny Middlesbrough Award. Ny trosa Tranokala ofisialy Middlesbrough
Ny fahombiazan'ny Adama Traoré tao Middlesbrough dia nahasarika ny Wolverhampton Wanderers izay tsy te-hividy azy. Ny mpanazatra azy, Nuno Espírito Santo Nahomby fahombiazana tamin'ny asa fitoriana tamin'ny fampiasana ny hafainganam-pandehany sy ny heriny tamin'ny alàlan'ny fanoherana ny fanasaziana ireo tongotra mandreraka.
Adama Traore- Nampiasaina ho faran'ny fitaovam-piadiana hamonoana ireo mandreraka
Amin'ny fanamarihana tsy hay hadinoina, ny hafainganam-pandeha sy ny herin'ny Adama Traore no tena nitoraka tamin'ny 6 ny volana Oktobra 2019. Andro iny no nanaovana fahirano an'i Adama Pep GuardiolaNy ekipan'ny lehilahy mahery fo an'i Man City rehefa nahatratra tanjona roa tamin'ny fandresena lavitra (0-2), hira iray izay tena fampiavaka lehibe indrindra amin'ny asany matihanina.
Ny andro Adama Traore dia nanasazy an'i Man City. Ny trosa 90Min
Ankehitriny, tsy isalasalana, ny Adama dia nahatonga ny mpankafy baolina kitra hino fa ny hafainganam-pandeha sy ny hery dia iray amin'ireo fepetra takiana amin'ny maha mpilalao baolina ankehitriny. Ny ambiny, araka ny nambarany, dia tantara ankehitriny.
Adama Traore Tantara Firaisana Ankizy Miampy Fanamarihana Biography Untold - Relationship Life
Miaraka amin'ny fiakaran'ny lazany sy ny lazany indrindra ao amin'ny FIFA, mpankafy maro no misaina hahalala raha manana sipa na vady i Adama Traore. Tsy isalasalana fa ny vatany sy ny bika aman'endriny dia azo antoka fa hahatonga azy ho ao amin'ny lisitra faniriana ho an'ny olon-tiany ho an'ny ankamaroan'ny mpankafy vehivavy.
Iza no sakaiza Adama Traore ?. Ny trosa amin'ny IG
Toy ny tamin'ny fotoana nanoratana, dia hitanay fa tsy misy ny dikan'ny Adama manana sipa na efa tafiditra amin'ny fifandraisana rehetra. Avy amin'ny fisehoany dia aleony mifantoka amin'ny asa baolina kitra ataony. Na izany aza, dia mahita tanora marobe amin'ny baolina kitra no mihetsika toy izany isika mba hitoerany hijanona amin'ny alàlan'ny dingana lehibe amin'ny fikarakarana azy ireo. Mety ho manana sipa koa i Adama nefa aleony tsy hanao ny fifandraisana amin'ny besinimaro aminy izao.
Adama Traore Tantara Firaisana Ankizy Miampy Fanamarihana Biography Untold - Fiainana manokana
Ny hahafantaranao ny fiainam-piainganan'i Adama Traore avy eny ambony eny dia hanampy anao hahazo sary tsara kokoa azy. Manomboka, raha vao jerena ny Adama, dia hitanao ny niantombohan'ny zavatra iray matanjaka sy mikorontana. Eny an-kianja, mandinika manokana ny asan'ny gym izy, antony iray lehibe amin'ny hozatra ary ny vatana.
Tamin'ny resadresaka niarahana tamin'ny marca, Adama kosa nilaza fa ny mifanohitra amin'izay no izy, fa tsy mpanatanja lanja izy. Amin'ny teniny; “Tsy navesatra ny lanjany iray aho. Fantatro fa tsy hino izany ny olona fa marina. ”. Ny fanontaniana dia; Do ianao izay mamaky ity lahatsoratra ity dia mino izay nolazainy na dia eo am-piheveranao ny sarin'izy ity amin'ny maha mpilalao baolina kitra 17 vao taona iray?…
Sarin'i Adama Traore ho mpilalao baolina kitra 17. Sary: Trollfootball
Faharoa amin'ny fiainany manokana, Adama Traore dia olona izay manana zavatra hatolotra an'izao tontolo izao ary tsy misy zavatra hafa ankoatra nySpeed”Mitondra ny baolina kitra izy. Tsy mety ho ao amin'ny laharana Messi ary C Ronaldo, nefa Adama Traore dia namorona ny tontolon'ny fahalehibiazany manokana araka ny hita ao FIFA18 Loka. Porofo an-tsary (eto ambany).
Adama Traore Tantara Firaisana Ankizy Miampy Fanamarihana Biography Untold - Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Iray amin'ireo mpifindra monina Malawi 55,000 izay mipetraka any Espaina (Efe Reports), ny fianakavian'i Adama Traore dia anisan'ireo vitsy mahomby izay nanao anarana ho azy ireo. Ny fianakaviana dia ampidirina manadino ny lalan-kalehany mankany amin'ny fahaleovantena ara-bola amin'ny alàlan'ny fitaovana baolina kitra.
Adama Traore Dada: Ny dadany izay voatonona anarana fotsiny hoe "Hag”Dia ny Malia madio avy amin'ny razana. Rehefa mijery an'i Baba izay sary etsy ambany miaraka amin'ny zanany lahy dia zavatra iray tonga ao an-tsaina. Ny rafitry ny vatana sy ny zanany lahy. (ireny ati-batana ireny no manangana!). Azonao atao ny mamintina mora fa i Adama dia naka ny rainy taorian'ny nananganana ny rainy.
Adama Traore dia nifamaly tamin-drainy. Credit: IG
Baba toy ny filalaovana tsara maro dia ilaina amin'ny fanohanana an'i Adama raha mbola tany amin'ny orinasa mpanao baolina any Catalonia izy.
Reny Adama Traore: Fatoumata no anarany ary matetika izy dia antsoina hoe â € ˜ny reny mpanohanaâ € ~. Araka ny zanany lahy Adama; "Nanohana ahy foana i Neny, nitondra ahy hatraiza hatraiza ary nitondra ahy ho mpilalao tanora. Efa niaraka tamiko izy, ary nanohana ahy, ilay andro nofidiko ho an'ny Wolves. "
Adama Traore miaraka amin'ny reniny. Credit: IG
Rehefa mitsara ny sarin'izy ireo eo ambony dia azonao atao ny milaza fa ny fitiavana feno fitiavana dia misy eo amin'i Adama sy Fatoumata, izay mihoatra noho ny fitiavana hafa rehetra ao am-pon'izy ireo.
Rahavavy Adama Traore: Ity ambany ity ilay rahavavin'i Adama tsara tarehy izay mandeha amin'ny anarana hoe Asa. Mipetraka any Espaina izy amin'ny fotoana anoratana, ary matetika mitsidika ny anadahiny any Angletera.
Adama Traore dia miaraka amin'i Asa rahavaviny. Credit: IG
Rahalahy Adama Traore: Mohamed TraorÃ © Diarra izay fantatry ny anaram-bosotra hoe â € œMohaâEnya zokin'i Adama. Moha (teraka 29 ny Novambra 1994) izay roa taona noho ny Adama dia lasa mpanao baolina kitra matihanina.
Hihaona amin'ny rahalahin'i Adama Traore - Moha. Sary: Nkistra. Ny trosa amin'ny IG
Ho toy ny fomba fandoavana ny fankatoavan'ny fianakaviany, i Moha tamin'ny 17 ny volana febroary tamin'ny taona 2014 dia nivadika tany Espana mba hilalao ho an'i Mali. Amin'ny fotoana anoratana, dia milalao ho an'ny klioba espaniola HÃ © rcules ao amin'ny Segunda DivisiÃ³n B izy no dingana fahatelo amin'ny rafitry ny ligy baolina espaniola.
Adama Traore Tantara Firaisana Ankizy Miampy Fanamarihana Biography Untold - Lifestyle
Ho an'ny mpilalao baolina izay mahazo vola 2.6 tapitrisa Euro (Pila tapitrisa Million) isan-taona amin'ny fotoana anoratana, tena misy vola ampy ho an'ny fiainana mahazatra. Ny fahombiazan'ny vola ara-bola Adama Traore dia mifamatotra mivantana amin'ny zava-bitany amin'ny maha mpilalao baolina kitra azy.
Mahazo vola be tsy mifindra amin'ny fiainana miaina aody, izay mora jeren'ny mpilalao izay manao tranobe lehibe sy fiara mandehandeha. Adama mahay ny fomba fitantanany vola. Mandeha fiara tsy mihetsika izy ary miaina fomba antonony ho an'ny mpilalao baolina iray.
Adama Traore Fiainana fiainana. Credits sary: ​​CNBC, IG ary Business Arabo. Ny trosa amin'ny Twitter
Adama Traore Tantara Firaisana Ankizy Miampy Fanamarihana Biography Untold - Untold Facts
Ny reny ambany indrindra ao amin'ny karany: Ny volana Janoary 2016 dia voarakitra ho fotoana iray naharary indrindra tamin'ny asany. Fantatrao ve?… Adama Traore dia noroahina avy amin'ny ekipa zokiolona Aston Villa noho ny fotoana namerenana ny famoretana. Ity fanapahan-kevitra ity dia nisy fiatraikany ratsy teo amin'ny ekipany satria nihataka tamin'ny ekipany ambony anglisy izy tamin'ny faran'ny vanim-potoana.
Manana CV tsara izy: Marobe ny laza baolina kitra no tonga manerana an'i Adama Traore raha nilalao ny FIFA ary mazava ho azy, Wolves. Ny marina dia, mpanao baolina haingana sy mahery ny mpilalao baolina kitra avy hatrany notsongaina tao amin'ny CV-ny miresaka ny zava-bitany.
Adama Traore Untold Nomen'ny mari-boninahitra amin'ny asa.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra tamin'ny famakiana ny tantaran'ny Adama Traore Childhood Child plus Untold Biography Facts. amin'ny LifeBogger, Miezaka izahay mba hanana ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mety, dia zarao aminay ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hanome voninahitra sy hanaja ny hevitrao foana izahay.